I-Timo Werner Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE I-Timo Werner Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-German Football Genius eyaziwa yi-isidlaliso; "I-Turbo Timo". Indaba yethu yeTimo Werner Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi we-OFF-Pitch (angaziwa kakhulu ngaye).
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezinyathelo zakhe namandla emkhakheni wokudlala. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abalwazi kakhulu nge-Bio kaTimo Werner okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UTimo Werner wazalwa ngosuku lwe-6th ka-Mashi 1996 kunina, uSabine Werner noyise, uGünther Schuh eStuttgart, eJalimane. Ebonakala ngezansi ebukeka bakhe, u-Timo wazalelwa isiJalimane esilungile ngesakhi sofuzo esivela kuGugu elijulile laseJalimane.
Ukukhula, bekukhona ukuqiniseka okuphezulu ukuthi ibhola liyoba ukubiza kwakhe. Kuyathakazelisa ukuthi ubaba wakhe uGünther Schuh naye wayengumdlali webhola lezinyawo owadlala phambili ngesikhathi sakhe.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi uTimo uvela ekhaya elingavamile ngokuqala okuthobekile. Ukukhula, abazali bakhe bamfundisa izindinganiso zokuziphatha ezidingekayo okungukuthi; (ukuhlonipha bonke, ukuphana / okuwusizo, unomqondo wemfanelo, ungalokothi ubulimaze noma ubani kanye nokubaluleka kokukwabelana). Njengoba uTimo Werner ebeka;
"Uma nginomndeni wami nabangani bami angiyena uTimo Werner umdlali webhola, ngiyena nje uTimo, indodana ethobekile, umngane ... nje umfana onjengawo wonke umuntu. Uma ngenza okuthile okungalungile abesabi ukungitshela! "
Abazali bakhe bahlehla phansi futhi banengqondo kwenza uTimo ngokwakhe ahlonipheke futhi ahlonishwe kahle. Ngaphezu kwalokho, wabonakala njengenzuzo engcono kakhulu kunobaba wakhe. UTimo Werner wabuye wakhumbula ezinsukwini zakhe zobuntwana ukuthi wayejwayele kanjani ukugijima izintaba noyise ukuze athuthukise ukuqina kwakhe nokudlala. Lokhu kubonakala njengomakhi wokwenza umsebenzi wakhe okwesabekayo, kwakungabonakali njengento ebaluleke kakhulu ngabazali bakhe. Kumama wakhe nobaba, imfundo kumele ifike kuqala ngendodana yabo.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
Ukukhula, uTimo kwakukhulu Mario Gomez fan. Njengoba ehambisana neqiniso lokuthi uyise wayenomdlali webhola lezinyawo, intshisekelo yakhe emidlalweni yayiqinisekile. Enkulumweni yakhe, utshele abezindaba ukuthi wayesebenama-posters Mario Gomez ekamelweni lakhe ngenkathi engu-11-12 iminyaka ubudala njengoba kuchazwe ngezansi.
Ngokungafani nabaningi bebhola labadlali abasha, uTimo waqeda esikoleni sakhe esiphakeme. Ngokuvumelana ne Bundesliga iwebhusayithi esemthethweni. Abazali bakhe ikakhulu uSabine Werner, (unina) wayefuna indodana yakhe iqede imfundo yesikole (okungenani, esikoleni esiphakeme) ngaphambi kokuba abe ngumdlali webhola lezemidlalo. Emuva ngaleso sikhathi esikoleni, uTimo wayengumfundi ojwayelekile futhi ongeyena othungathayo nakuba ayelahlekelwe isigamu samahora akhe esikoleni (ngenxa yokuzibophezela kwebhola) wakwazi ukuphothula i-2014 eneminyaka engu-17.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi wokufingqa
Ngisho nalapho esikoleni, ukukhathazeka kukaTimo kwebhola kwambona ebhalisa eqenjini leqembu elisha elibizwa ngokuthi TSV Steinhaldenfeld owamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe. Leli qembu lenze umsebenzi omangalisayo wokwakha isisekelo somsebenzi womfana osemncane okudingekayo ukuba uhambe ngendlela ehamba phambili ebusheni obusha obukhulu ngeVfB Stuttgart.
UTimo usayinele iVfB Stuttgart ekupheleni kwesikole esiphakeme, egcwalisa isifiso somzali wakhe sokuya esikoleni ngaphambi kokugxila kuphela ebhola.
E-VfB, umsebenzi wakhe wathatha ukuvuka kwezimvula futhi wazibona ekhula ngaphezu kwazo zonke izigcawu zentsha ngaleyo ndlela eheha isithakazelo kumaqembu amakhulu amakhulu lonke elaseYurophu. Lokhu akuzange kushintshe umlingiswa wakhe noma indlela engezansi komhlaba emsebenzini wakhe.
Ku-2016, uWerner wahamba waya eRB Leipzig kuzo zonke izindawo. Wenze umphumela osheshayo eqenjini lakhe elisha, ubeka izikhathi ze-21 emidlalweni ye-31 ngesikhathi sakhe sokuqala. Ukubusa kwakhe ebhola laseJalimane kwaholela esitelekeni sakhe sesibili; RB Leipzig rocket fuel. Lokhu kwalandelwa ukushayela ithimba likazwelonke laseJalimane Joachim Löw.
Ngokumangalisayo, Mario Gomez owayengumdlali wakhe manje waba ngumncintiswano wakhe eqenjini lesizwe laseJalimane.
Ngamafuphi, i-Timo impela, ilungu elizothola isizukulwane esisha segolide saseJalimane. Ungenakuzaza, isiphepho esikhulu kunazo zonke talente kusukela Mario Gomez.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva kokubona konke okuphumelelayo, Kuvamile ukuthi umfundi we-athikili abe nesifiso sokwazi ukuthi ngubani u-Timo ophola naye. Ngaphandle kokungabaza, uTimo uyinkanyezi emdlalweni. Ikhono lakhe lokudlala, kanye nokwazi indlela yakhe yokuphila ngaphandle komdlalo kusiza ukwakha umfanekiso ophelele ngaye.
Ebhekene nezithombe zakhe ezivezayo ezibonisa ubuhle beqiniso, kuthiwa uJulia uyisibonelo noma mhlawumbe imodeli yokuzivocavoca.
Kodwa ngaphandle kokuqiniswa okunamandla ukubuyisela izimangalo zethu, ukucabanga kuthatha iphuzu endaweni engenalutho. UTimo ubelokhu ethandana nesimo sokukhubazeka esiseStuttgart esivela kuJulia Nagler kusukela ekuqaleni kwakhe kwebhola. Ubuhlobo babo bukhula kusukela kubangane abangcono kakhulu futhi baphela othandweni lweqiniso. Bobabili abathandi bancane kakhulu. U-Timo unyaka owodwa kunoJulia Nagler ongumfundi e-University of Stuggart.
UJulia kungenzeka ukuthi akayena intombazane enhle kunazo zonke eJalimane kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uTimo umnike inhliziyo yakhe.
Lo mbhangqwana ukhethe indlela yokufihlakele ebuhlotsheni bawo ngaleyo ndlela ugcine ubudlelwane bawo obunqunu. Ngenkathi ngidlula ngezindaba zikaTimo Werner ezokuxhumana nabantu, akukho buhlobo obubonisa ukuthunyelwe kubonakala kepha masingakhohliswa ngeqiniso elifihlekile. Abaningi benza ukulinganisa ukuthi uTimo ungashadile futhi uphule noJulia, kodwa uthando lwababili abathintekayo lube lukhuni ngemuva kokukhanya kwezindaba. Ngesinye isikhathi ngemva kokuzwa ukuhleka kokuhlukana kwabo, bobabili abathandi banquma ukuhlanganyela isithombe sabo (njengoba kuboniswe ngezansi) ngenhloso yokwethusa abesifazane ukuba bacabange ukuthi indoda kaJulia ingashadile.
Ukubheka impilo yakhe phansi kanye nokuqala okuthobekile, Kubuye kubonakale ngokucacile ukuthi ibhola laseJalimane phambili alikho emarekhodi ezindabeni ezedlule.
Yebo, noma ngabe akuyona imidiya yezenhlalakahle, lo mbhangqwana awuphuthelwa ukuhlanganyela izikhathi ezimnandi ngenkathi wenza ukubonakala komphakathi ndawonye. Emuva ku-2017, uTimo Werner nentombi yakhe uJulia benza ukuthanda kwabo kwi-party ye-2017 Christmas endaweni ye-VIP ye-Red Bull Arena kanye nezivakashi ze-600, kuhlanganise neqembu le-Bundesliga nabo bonke abasebenzi. Ngezansi isithombe sithandani esithandekayo.
Kodwa-ke, uTimo nentombi yakhe uJulia akenzanga izindaba zezinhlelo zabo zokuzibandakanya noma zomshado, kodwa njengoba kubonakala, usuku alukude kakhulu. Ukubheka ngendlela abathandana kakhulu ngayo, kungumlando wesikhathi ngaphambi kokuba bashade NOMA CHA. Yebo !! sathi lokho. Kungenzeka bangashadi eziningi zibangelwa umkhuba emndenini kaTimo Werner ovezwe esigabeni sokuphila komndeni ngezansi. Noma kunjalo, i-LifeBogger iyabafisela okuhle, umunwe weqa!
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Ukuqala ngamaqiniso amaningi mayelana nomndeni wakhe, kubalulekile ukuqaphela ukuthi abazali bakaTimo Werner engashadile. Sazi kanjani lokhu? Lapho siphenywa ngokucophelela, sabona ukuthi uTimo unalo igama lokugcina likamama esikhundleni sikayise ngenxa yezizathu ezingakaziwa. Kodwa-ke amawebhusayithi ambalwa aseJalimane afakazele ukuthi bobabili abazali bakhe nabazali bomama abashadile.
Njengoba kushiwo ekuqaleni kwalesi sihloko, unina kaTimo unalo igama Sabine Werner kuyilapho uyise ebizwa ngegama Günther Schuh. Naphezu kwala maqiniso, yini ebaluleke kakhulu ukuthi umndeni wakhe ubhekwa phansi emhlabeni futhi uTimo uyajabula ukuvela ekhaya elinjalo eliphansi.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukujikeleza kanye nenkinga yokuphuza
Ku-2017, uTimo Werner usemukelwe ngemuva kwemizuzu engu-32 yomdlalo we-Champions League uRB Leipzig emelene neBesiktas eVodafone Arena e-Istanbul, eTurkey. Lokhu kungenxa yokuthi waba nenkinga yokusakaza nokuphefumula emoyeni ebangelwa abalandeli bomsindo. Isimo esinobutha eTurkey sashiya iTimo singenasisindo. Uqale ngokuzama ukuvimbela umsindo ngokugxila iminwe yakhe ezindlebeni zakhe kanti iqembu lakhe lidinga ukuba lihlasele lapho kunomgomo phansi.
Umsindo waba namandla kakhulu futhi awulawulwa uMerner earplugs ngumqeqeshi wakhe. Ngemuva kokuthi le nkinga iqhubeka, uTimo kwadingeka abe yimizuzu engu-31 engena esikhundleni se-Champions League, ngenkathi uhlangothi lwakhe lusekhona i-1-0 phansi. Lokhu kweza ngemuva kokuphikelela ukuthi ufuna ukushiya insimu. Ngemuva komdlalo umqeqeshi wakhe uthe;
"Akunakwenzeka ukulungiselela ithimba lakho ngomkhathi onjena. Kwakukhona umsindo wezithulu uTimo ozonda. "
"Ngami, njengomqeqeshi, kubalulekile ukubona ukuthi ngingubani ukuthi ngingathembela ngezikhathi ezinjengalezi. ozimisele ukuzivikela, ukumelana nomsindo ovela kubantu baseTurkey. "
Umphathi weRB LEIPZIG uRalph Hasenhuttl wabe esebuza umlingisi kaTimo Werner ngokucela ukuthi angene esikhundleni seBesiktas.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okusheshayo
U-Timo Werner uye wavala imizuzwana engu-11.11 ngaphezu kwamamitha angu-100. Yileyo ndlela ayithola ngayo isidlaliso sakhe sokuqala; 'I-Turbo Timo'yizindaba zeJalimane ngenxa yokuhamba kwakhe.
Ijubane lakhe elihambisana nobuhlakani bakhe obuhle kulo mdlalo linikeze izilinganiso ezilandelayo zeFIFA. Njengoba ehambisana nobusha bakhe, ubonakala njengenhloso yokudlulisela phambili abadlali beFIFA abadlala I-League League.
Emuva ngaleso sikhathi ngonyaka wakhe wokugcina esikoleni, uTimo owayengumnyaka we-17 wayegijima ngamamitha angu-100 kumasekhondi angaphezu kwengu-11 kuphela.
Timo Werner Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-Dream Dream
Njengesikhathi sokubhala, uTimo Werner unesivumelwano neRB Leipzig esabekwa ukugcina kuze kube yi-2020. Kodwa-ke, uTimo wembule ukuthi amaphupho okuthuthela ku-Premier League nokuthi uyakuthanda kakhulu Manchester United ngenxa yomlando wabo kanye ne-phylosophy.
"Yebo, ukudlala ku-Premier League kuyiphupho kimi. Ngingathanda ukudlala amaqembu amabili noma amathathu, kanti iManchester United ingenye yalezi zinhlangano. Kodwa mhlawumbe eminyakeni embalwa elandelayo - kamuva, lapho isiNgisi sami singcono kakhulu! Ngikhululekile kakhulu eRB Leipzig, kodwa "
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeTimo Werner Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-German Football Diary
I-Kai Havertz Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Thilo Kehrer Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Ethan Ampadu Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Leon Goretzka Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Niklas Sule Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Andre Schurrle Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-Marc-Andre ter Stegen Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
U-Leroy Sane Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts